शिव रेग्मीको नजरमा सबै हिरो अब्बल – Sourya Online
शिव रेग्मीको नजरमा सबै हिरो अब्बल
सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ ६ गते ०:२३ मा प्रकाशित
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दुई दशक बिताइसकेका दिग्गज निर्देशक शिव रेग्मीलाई नेपालका नायकहरूको मूल्यांकन गर्ने अभिभारा दिइयो । राजेश हमालदेखि राजवल्लभ कोइरालासम्मको मूल्यांकन उनको मुखबाट सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो मानौँ नेपालका नायकहरू सबै गुणैगुणका खानी हुन् । रेग्मीले कुनै पनि नायकका कमजोरी खासै औँल्याएनन्, केवल प्रशंसा मात्रै गर्न चाहे । राजेश हमालदेखि निखिल उप्रेतीसम्मलाई ‘अभिनयमा निपुण’ भनिदिए । त, उनकै शब्दमा पढौँ– नेपाली नायकहरू को कस्ता छन् ?
राजेश हमाल : सबैभन्दा मन पर्ने उहाँको आवाज हो । त्यसैले कराउनुपर्ने रोलमा थुप्रैले उहाँलाई काम गराएका छन् । मैले पहिलोपटक हामी तीनभाइ चलचित्रमा उहाँलाई काम गराएको छु । उहाँको मेहनत देखेर प्रभावित छु । तारिफयोग्य काम गरेका छन् । जतिले चलचित्र हेरे, सबैभन्दा मन मनपराएको उहाँको अभिनय नै हो । उहाँको आवाज मात्र होइन, अभिनयको पनि सदुपयोग गर्न सकेको छु । अभिनयक्षमता अचम्मको छ । अभिनयबाट दर्शकलाई छिट्टै नै हँसाउन अनि रुवाउन सक्नुहुन्छ । डाइलग डेलिभरी राम्रो छ, संवाद स्मरणशक्ति अचम्मको छ । लामो डाइलग पनि सजिलै बोल्नुहुन्छ । गाउँले र सहरीया दुवै भूमिकामा सुहाउँछ । उहाँलाई धेरैले एक्सनमा लिएका छन् तर मैलेचाहिँ भावनात्मक अभिनय गर्ने नायकका रूपमा पाएको छु ।
शिव श्रेष्ठ : उहाँसँग काम गर्ने लामो समयदेखिको इच्छा युद्ध चलचित्रमा आएर पूरा भयो । उहाँ हास्य रसमा डुबेर पनि संवेदनात्मक अभिनय गर्ने पहिलो कलाकार हो । उहाँको अभिनयको तारिफ गरेर भ्याउँदिनँ । स्वभाव पनि निकै मिलनसार । उहाँ आफैँलाई चाहिँ हास्य विधा मन पर्दो रहेछ तर संवेदनशील भूमिकालाई पनि उत्तिकै न्याय गर्न सक्नुहुन्छ । लामो वाक्यांशमा डाइलग बोलाउन अलि कठिनचाहिँ छ । ठूलो हृदय भएका भावुक नायक । मेरो विचारमा उहाँलाई हास्य विधा नै बढी म्याच गर्छ ।
भुवन केसी : हरेक प्रकारको अभिनयमा पोख्त कलाकार हो, उहाँ । जुन भूमिका आइपर्छ, डुबेरै अभिनय गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा लिएको छु । विशुद्ध कलाकारिताकै लागि जन्मेको मान्छेजस्तो । सुरु गरेपछि मज्जाले डुबेर राम्रो अभिनय गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ । कलाकारले दृश्यलाई प्रस्ट पार्न संवाद बोल्नुपर्ने हुन्छ । केसीको चाहिँ आँखा नै बोलिरहेको हुन्छ, दृश्य प्रस्ट्याउँछ । मानौँ– उहाँले अभिनय गर्दा कति ठाउँमा संवाद नभए पनि फरक पर्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा, एउटा पूर्ण कलाकार । मैले निर्देशन गरेको दुनियाँबाट सर्वश्रेष्ठ कलाकारको अवार्ड जित्नुभएको छ उहाँले । चलचित्रको विषयमा चिन्तन गर्दा घन्टौँ बिताउन सक्नुहुन्छ । उहाँ र म साथ बसेर चलचित्रका गफ गर्दा समय बितेको पत्तै पाइँदैन ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठ : यी त मलाई आफ्ना अंश दिन नपर्ने भाइजस्ता लाग्छन् । मेरो निर्देशनका थुप्रै चलचित्रमा काम गरेका छन् । मेरो निर्देशनको पहिलो चलचित्र आफन्तका नायक पनि यिनै हुन् । आफन्तदेखि पछिल्लो कहाँ भेटिएलासम्मको यात्रामा थुप्रै सफल चलचित्रमा एकसाथ काम गर्‍यौँ । अभिनयका विषयमा भन्नुपर्दा उनको अभिनय भनेको मेरै अभिनय हो । अभिनयमा ५० प्रतिशत मैलाई फलो गरेका हुन्छन् । हामी दुई भए पनि संगतले एक हाँै । नजिकका आफन्तमध्ये एक मानेको छु । मलाई अभिनय गराउन सजिलो कलाकार हुन् । इसारा गर्दा नै सबै बुझ्ने । स्क्रिप्टमा राम्रो अध्ययन गर्ने, विषयवस्तुमा डुब्ने खुबी राम्रो छ । हाम्रो सहकार्य १५ वर्षजति पुग्यो होला । यो संगतका आधार उनले चुजी बानीलाई सुधार गुर्नपर्ने देख्छु । चलचित्र छान्दा अति नै सोच्ने प्रवृत्ति छ, जसकारण राम्रा चलचित्र पनि हातबाट फुत्किरहेका हुन्छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिए राम्रो हुन्छ ।
दिलीप रायमाझी : मलाई मन पर्ने, प्यारो अनि माया लाग्दो कलाकार हुन् । निर्देशनयात्राको दोस्रो चलचित्र आफ्नो मान्छेमा अभिनय गराएको छु । उनका राम्रा पक्ष धेरै भएकाले एक–दुईवटा नराम्रा पक्ष मात्र केलाउँदा हुन्छ । म आफँै उनको फ्यान हो । अभिनय साँच्चै नै राम्रो छ, अभिनयमा यिनको बराबर कोही छैन चलचित्र क्षेत्रमा । अभिनयको हिसाबले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो भने उनले पाउन सकेका छैनन् । हरेक भूमिकामा पर्फेक्ट अभिनय गर्ने कलाकारमा पर्छन् । अभिनय टिप्न खप्पिस कलाकार । नजानेका केही छैनन् । निर्देशकले उनलाई सदुपयोग गर्न नजानेका मात्र हुन् । डाइलग डेलिभरी र नृत्य अति राम्रो छ ।
निखिल उप्रेती : यी त्यस्ता नायक हुन्, जसको एक्सन देख्दा आश्चर्यमा पर्छु । एक्सनमा उनको जति सायदै कसैले गर्लान् । अभिनय पनि राम्रो छ । अभिनयलाई निर्देशकमा पूरै समर्पित गराइदिन्छन् । उनीबाट चाहेजस्तो काम लिन सकिन्छ । मसँग काम गरेका तीन चलचित्र हामी तीनभाइ, मानिस र युद्धबाट तीनैचोटि उत्कृष्ट अभिनेताको अभिनय जितेका छन् । कतिपय निर्देशकले निखिललाई अभिनय आउँदैन भन्छन् तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । निर्देशकले सिकाएको टिप्न सक्ने कलाकार हुन् । भूमिका सकेसम्म एक्सनै दिनुपर्छ । डाइलगको भाषा ठीकै छ ।
विराज भट्ट : विराजसँग मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएको छैन । एउटै चलचित्र अर्जुनदेवमा अभिनय गराएको छु । एक्सन, आवाज र डाइलग उनका सबैभन्दा सशक्त पक्ष हुन् । तर, सबैलाई यो कुरा थाहा छैन, त्यसैले बढीजसोले एक्सनमा प्रयोग गरेका छन् । तर, म त उनको डाइलगको दिवाना छु । निर्देशकहरूले विराजको अभिनय बाहिर निकाल्न नसकेजस्तो लाग्छ मलाई । उनी पर्फेक्ट कलाकार हुन् । आफूलाई केही परिमार्जित गराएर लागिपर्ने हो भने उनको विकल्पको नायक मैले देखेको छैन । केही यस्ता चलचित्र मात्र खेल्न बाँकी छ, जसमा उनको भूमिका गहन र संवेदनशील होस् । मलाई विराजको एक्सन भन्दा पनि अभिनय राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
सुमन सिंह : यीसँग मनले मनलाई छुन्छमा काम गरेको छु । उनी गम्भीर स्वभावका लाग्छन् । काममा सेन्सेटिभ छन्, भूमिकामा लागिपर्ने प्रवृत्ति छ । अभिनय खोट लगाउनुपर्ने खालको छैन तर पनि किन हो उति जम्न सकिरहेका छैनन् । छानेको भूमिका नै त्यस्तै भएर हो वा छान्न नजानेर, उचाइमा पुग्न सकेनन् । डाइलग डेलिभरी एकदम राम्रो छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा भुवनपछि आँखाले अभिनय क्षमता देखाउने नायक सुमनलाई पाएको छु ।
राजवल्लभ कोइराला : बौद्धिक व्यक्तित्व भएका कलाकार हुन् । अरूलाई सत्कार र आदर गर्न जानेका छन् । राम्रो अध्ययन गरेकाले नजानेको विषय केही छैन । हरेक विषयमा बहस गर्न सकिन्छ उनीसँग । एकदम राम्रो कलाकार हुन्, स्क्रिप्टको नलेज पनि छ । भूमिकालाई अभिनयका दृष्टिले मजबुत बनाउन लागिपर्ने र मेहनत गर्ने बानी छ । सुधार्नुपर्ने पक्ष पनि केही छन् । बलिउड तथा हलिउडमा कुनै कलाकार चल्यो भने त्यसको भाषा नक्कल गर्ने बानी सुधार्नुपर्छ । किनभने अरूका थुप्रै कमन सेन्स हामीसँग मिले पनि कति कुरा हाम्रा आफ्नै खालका छन् । अरूसँग मेल खाँदैनन् ।
रमित ढुंगाना : यिनी चलचित्र क्षेत्रका ‘इनोसेन्ट ब्वाय’ जस्ता लाग्छन् । मुग्लान चलचित्रमा मसँग काम गरेका छन् । राम्रो सम्भावना बोकेका कलाकार लाग्छन् । प्रकृतिले शरीर पनि राम्रै दिएको छ । देख्दै हिरोजस्तो लाग्ने नायकमध्ये एक । अभिनय पनि राम्रो छ । उनैले नगरेका हुन् वा निर्देशकले गराउन सकेनन्, हुनुपर्ने जति हुन सकेका छैनन् । त्यसो त उति संघर्ष नगरेका कारण पनि पछि परेका हुन् कि ? नेपालमा संघर्ष त गर्नैपर्छ । मेरो विचारमा उनले डायलग डेलिभरी र नृत्यमा केही सुधारचाहिँ गर्नुपर्छ । नेपालमै संघर्ष गरे राम्रो स्टार बन्ने सम्भावना देख्छु ।
प्रस्तुति : कुवेर गिरी
‘गुड मर्निङ ! माउण्ट एभरेष्ट, तिमीले आज मलाई नम्रताको पाठ सिकायौ’
बेथिति, विसङ्गति र अपसंस्कृतिको पोल खोलेकाे ‘यात्रा’ विमोचन
नाम्चेमा किशोरीहरुसँग फुटबलमा रमाउदै परिणीति
‘यो माया कस्तो माया’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक
सशानको निर्देशनमा हिन्दी गीत
१२ सीडीओको सरुवा, को कहाँ?
नवदुर्गा भवानीको प्रसादस्वरूप रातो टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी
काठमाडौं भित्रिन थाले सर्वसाधारण
‘दुर्घटनाका घाइतेकाे उपचार र मृतकका परिवालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्’